Distance Learning PLUS - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Moodelkeena Distance Learning PLUS, ardaydu waxay si nabad ah wax ugu bartaan guriga waxayna ku lug yeeshaan barashada shaqsiyeed iyagoo wata taageerooyin mideysan. Barashada waxaa ka mid ah barashada tooska ah ee macalinka iyo shaqada ardayda madaxa banaan, oo ay ku jiraan iskudhaf shirar macmal ah, kalfadhiyo fasal is dhexgal ah iyo fiidiyowyo horay loo duubay.
Barashada Shakhsiyeed oo leh Taageero Midaysan
Taageerada shaqsi ahaaneed waxaa heli doona ardayda ballan. Taageerada qofka-qof ahaaneed waxaa ka mid noqon kara kaalmada teknolojiyadda, umeerin, adeegyada waxbarashada gaarka ah iyo taageerada caafimaadka maskaxda.
Farqiga u Dhexeeya Barashada Fogaanta
Ka-jawaabista Dhibaatada Barashada Fogaanta
Faafa awgeed, Ardayda iyo Qoysaska waxaa lagu karantiilay Guriga iyadoo la heli karo Adeegyo Taageero oo Xaddidan
Gu'gii 2020, degmada iyo dugsiyadu waxay kujireen Barashada Fogaanta Dhibaatada, taas oo lahayd xadeyn ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda, ilaha, awoodaha qoyska iyo dhibaatooyinka caafimaad ee faafa.
Ardaydu waxay si nabadgelyo leh ugu hawl galaan Barashada Shakhsiyeed Gurigooda, iyagoo wata Kaalmooyin Midaysan
Moodelkeena Distance Learning PLUS, ardaydu waxay si nabad ah wax ugu bartaan guriga waxayna ku lug yeeshaan barashada shaqsiyeed iyagoo wata taageerooyin mideysan. Taageerada shaqsi ahaaneed waxaa heli doona ardayda ballan. Taageerada shaqsi ahaaneed waxaa ka mid noqon kara kaalmada teknolojiyadda, umeerin, adeegyada waxbarashada gaarka ah iyo taageerada caafimaadka maskaxda. Barashada waxaa ka mid ah barashada tooska ah ee macalinka iyo shaqada ardayda madaxa banaan, oo ay ku jiraan iskudhaf shirar macmal ah, kalfadhiyo fasal is dhexgal ah iyo fiidiyowyo horay loo duubay.
Wax-ku-kordhinta qaabkeenna barashada masaafada waxaa ka mid ah:
Qalabka dugsiga ee 1-ilaa-1 (iPad ama Chromebook) oo la siiyay dhammaan ardayda ku jirta fasallada K-12, taas oo u oggolaanaysa marin ballaadhan ardaydayada ugu yar.
Kordhinta isku xirnaanshaha iyo caddaynta xiriirka isgaarsiinta macallinka waxay ahayd fure muhiim ah oo ka imanaya qoysaska heerarka fasalka oo dhan. Dadaal diiradda la saaray oo ku saabsan hubinta xiriir joogto ah oo isdaba joog ah iyada oo loo marayo Nidaamyada Maamulka ee Barashada (Seesaw iyo Schoology) dhammaan dugsiyada / fasalada ayaa dhici doona.
Sannad dugsiyeedkan, waxaa naga go'an inaan ardayda ku barinno qaab si fiican ula jaan qaada yoolalkayaga, qiyamkeenna iyo heerarkeenna heer sare.
Qorshooyinka Barashada Fogaanta
Fadlan la soco, Qorshooyinka Barashada Fogaanta waa dareere waana la beddeli karaa.
Carruurnimada Hore: ECFE
Carruurnimada Hore: Dugsiga barbaarinta
Barnaamijka Tacliinta Dadka Waaweyn
Ardayda xanaanada caruurta ilaa fasalka 3aad waxay isticmaali doonaan SeeSaw waxayna yeelan doonaan ipad; ardayda dhigata fasalka 4aad iyo 5aad waxay isticmaali doonaan Schoology waxayna leeyihiin Chromebooks.
Kaararka (sida aan uga faa'iideysanay Dhibaatooyinka Barashada Maskaxda ee Guga) dib dambe looma isticmaali doono. Barashada waxaa lala waafajin doonaa heerarka gobolka.
Isniinta, Talaadada, Khamiista iyo Jimcaha (isku mid): ardayda iyo macallinkoodu waxay la kulmi doonaan "toos" waxayna ku bilaabi doonaan maalintooda kulamada subaxnimada. Waxbariddu waxay la mid noqon doontaa sidii qof ahaan, koox ballaadhan, koox yar iyo 1: 1 tilmaamid ah, oo ay weheliso shaqo madaxbannaan.
Arbacada (asynchronous): maalmaha waxbarashada la duubay. Ardaydu waxay baran doonaan iyagoo adeegsanaya horay loo duubay, barashada fiidiyowga ku saleysan sida casharrada fiidiyowga iyo shaqooyinka maalinlaha ah. Macallinka ardaygaaga ayaa diyaar u ah su'aalaha / wada xiriirka, sidoo kale wuxuu u isticmaali doonaa maalinta qorsheynta iyo horumarinta casharka.
Toddobaadka dhexdiisa oo dhan, waxaa jiri doona shaqooyin iskeed isu socod ah iyo baaritaanno lagu barto.
Macallimiintu waxay yeelan doonaan "saacadaha shaqada" laba illaa saddex jeer usbuucii iyada oo loo marayo Google Meet. Wicitaanada taleefanka sidoo kale waa loo yeeri karaa macallinka ardaygaaga, hase yeeshe, macallinka waxaa laga yaabaa inuu qaato ilaa 24 saacadood inuu ku soo celiyo wicitaankaaga. Saacadaha xafiiska ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu caawiyo shaqada guriga.
Haddii aad qabtid su'aalo shaqsiyadeed oo ku saabsan ardaygaaga, emayl ama taleefan wicitaan waa in loo diraa macallinka (halkii aad wax ku soo qori lahayd SeeSaw ama Schoology) si gaar loo wadaago macluumaadka.
Ardayda waxaa laga filayaa:
Ka hubi maalin kasta xaadiritaanka macallinkooda.
Si buuxda uga qaybgal fasallada tacliimeed ee jadwalka ah.
Dhammaan shaqooyinka ku dhammee waqtiga ku habboon.
Raac filashooyinka farsamada iyo tilmaamaha rajada ardayda.
Raac nidaamka CHAMPS waqtiga fasalka.
Hayso aag heegan u ah dhammaystirka shaqada iskuulka iyo howlaha guriga.
Ardaydu waa inay hubiyaan maalin kasta iyagoo kaqeyb galaya kulankooda subax.
Waalidka / mas'uulka ayaa u soo diri kara email ama u soo waci kara macalinka haddii ardaygu uusan awoodin inuu ku xirnaado tikniyoolajiyadda / internetka maalintaas. Tan waxaa loo tirinayaa xaadiritaanka haddii ardaygu kusii socdo shaqadiisa fasalka.
Haddii ardaygaagu jiran yahay, qoysaska waa inay wacaan khadka xaadiritaanka dugsigooda.
Imaanshaha waa muhiim; maqnaanshaha cudurdaar la'aanta waxay la socon doontaa barnaamijka goos gooska ee '' Iskuulka Aaad Ka Jirto '' ee Degmada Hennepin
Maalin aan cudurdaar lahayn ayaa la xusay haddii ardaygu aanu ka qaybqaadan fadhiyada tooska ah, casharrada guriga ama wicitaan looma sameeyo khadka xaadiritaanka.
Qaab dhismeedka maalinta dugsiga
Macallimiintu waxay u soo diri doonaan waalidiinta / masuulada jadwalka waxbarashada masaafada. Jadwalka sidoo kale waxaa lagu dhajin doonaa SeeSaw iyo Schoology.
Dugsigu wuxuu raaci doonaa xilliyada bilowga iyo dhammaadka; si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo ay ardaydu ku dhammayn karaan (dhammaystiraan) shaqadooda oo dhan goor hore.
Khabiiro (farshaxan, muusig, warbaahin, jimicsiga jirka) ayaa qeyb ka noqon doona maalinta dugsiga.
Shaqada ardayga waa in loo galiyaa SeeSaw ama Schoology.
Maalinta iskuulka ardaygaaga waxaa ka mid noqon kara: 30 daqiiqo kulanka subax ee maalmaha barashada isku mid ah; aqrinta kooxda oo dhan; koox yar oo akhris iyo qoris leh; xisaabta kooxda oo dhan; xisaab kooxeed yar; taakulaynta ardayda / shaqada guriga; goobaabinta xiritaanka
Sannad-dugsiyeedkan, waxaan u isticmaali doonnaa manhajka Tallaabada Labaad degmada oo dhan.
Ardaydu waxay awoodi doonaan inay galaan sooshalkooda iskuulka, cilmu-nafsiga iskuulka iyo lataliyaha iskuulka.
Waxaa la heli karaa qolal nasteexo ku shaqeeya.
Daaweeyeyaal xiriir la leh iskuulka ayaa loo heli doonaa kalfadhiyo farsamo iyo fool ka fool ah.
Waa maxay barashada iskudhafan?
Xilliga uu macallinku khadka tooska ah ku joogo ee ay heli karaan ardaydu iyada oo loo marayo tilmaam toos ah ama taageero (caddayn, hagid, iwm) ee meeleyn, waxqabad ama koox yar inta lagu jiro waqti cayiman. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa "live" meeshii isku mid ahaansho. Dadaal kasta ayaa la sameyn doonaa si loo duubo tilmaamaha barashada isku mid ah loona rakibo SeeSaw ama Schoology ardayda aan awoodin inay ka qeyb galaan.
Xiriirinta, wada hadalka, isdhexgalka ardayga-ardayga ama isdhexgalka macalinka iyo ardayda.
Waa maxay barashada asynchronous?
Waqti la duubay oo la daawan karo wakhti kasta. Shaqada ardayda ama waxqabadyadu waxay dhiirrigeliyaan barashada iyadoo lagu saleynayo Heerarka Waxbarashada ee Minnesota. Waxaan u isticmaali karnaa "wakhti kasta" meeshii aan asynchronous ahayn.
Akhrinta, dhajinta fiidiyowyada si loo arko, hawlo qoran oo ka faa'iideysanaya aqoon hore.
Ardaydu waxay isticmaali doonaan Schoology waxayna leeyihiin Chromebooks. Ardayda qaarkood waxay u isticmaali karaan barnaamij kale ama farsamo ku saleysan baahiyahooda naafonimo.
Barashada waxaa lala waafajin doonaa heerarka gobolka.
Fasallada xulafadu waxay kulmi doonaan semester halkii ay ka ahaan lahaayeen sannad-dugsiyeedka oo dhan.
Isniinta, Talaadada, Khamiista iyo Jimcaha (isku mid): ardayda iyo macallinkoodu waxay la kulmi doonaan "toos". Waxbariddu waxay la mid noqon doontaa sidii qof ahaan, koox ballaadhan, koox yar iyo 1: 1 tilmaamid ah, oo ay weheliso shaqo madaxbannaan.
Arbacada (asynchronous): maalmaha waxbarashada la duubay. Ardaydu waxay baran doonaan iyagoo adeegsanaya horay loo duubay, barashada fiidiyowga ku saleysan sida casharrada fiidiyowga iyo shaqooyinka maalinlaha ah. Taageerada shakhsi ahaaneed iyo naadiyada internetka ayaa ikhtiyaar u noqon kara ardaygaaga. Macallimiinta ardaygaaga ayaa diyaar u noqon doona shirarka fool-ka-foolka ah ee su'aalaha / wada xiriirka, sidoo kale waxay u isticmaali doonaan maalinta qorsheynta iyo horumarinta casharka.
Ardaydu waa inay iska xaadiriyaan waqtiga loo qoondeeyay ee fasalka inta lagu jiro waqtiga wax-barashada iyagoo saxiixaya aagga lagu sheekaysanayo ee kulannada Google Meet
Macallinka ayaa duubi doona xaadiritaanka oo duubi doona kalfadhiga si loo hubiyo imaatinka ardayda.
Ardayda seegta fasal waa inay lahaadaan waalid / ilaaliye waca khadka xaadiritaanka dugsiga dhexe si ay uga cudurdaaraan maqnaanshaha.
Macallinka latalinta ardaygaaga ayaa noqon doona qofka barta imaatinka iyo barta ugu muhiimsan ee xiriirka iyo wada xiriirka wixii su'aalo qaaska ah oo aan ku jirin.
Ardayda ka maqnaan doonta fasalada waa la aqoonsan doonaa waxaana loo soo bandhigi doonaa kooxda MTSS (nidaamka heerarka badan ee taageerooyinka) kooxda iyo dhexgalka ayaa la horumarin doonaa. Toddoba fasal oo seegay ka dib, qof shaqaale ah ayaa loo qoondeyn doonaa ardayga maalin kasta kormeerkiisa. Haddi 15 ka dib seegay xiisadaha, ardayga waxaa loo gudbinayaa la-taliyahooda heerka fasalka iyo / ama shaqaalaha bulshada.
Ardaydu waxay diiradda saari doonaan afar (4) 80-daqiiqadood oo cashar ah maalin kasta.
Ardayda badankood, maalin dugsiyeedkoodu wuxuu ku bilaabmi doonaa 30 daqiiqo oo La-talin ah.
Ardaydu waxay yeelan doonaan "jadwalka xannibaadda" oo leh afar fasal oo isku mid ah Isniinta iyo Khamiista, iyo isla afarta fasal Talaado iyo Jimcaha.
Fasal kasta oo 80-daqiiqo ah waxaa ku jiri kara waxqabad hordhac ah, waxbarid kooxeed oo dhan, waxqabad kooxeed yar, qiimeyn qaabeed iyo waxbarasho isku mid ah.
Dugsiyada dhexe waxay isticmaali doonaan nidaamka darajada warqada inta lagu gudajiro Barashada Fogaanta.
Ujeedada qiimeynta ayaa ah in la siiyo jawaab celin qoysaska iyo ardayda la xiriirta horumarka ardayga ee waxa ay yaqaanaan, iyo sameyn karaan, oo la jaan qaadaya Heerarka Tacliinta ee Minnesota.
Tababbarka qiimeynta waxaa ku jiri doona qiimeyn qaabeed (shaqo guri, shaqo maalinle ah) iyo qiimeyn kooban (mashaariic, waxqabad, shaybaarro, bandhigyo, iwm.)
Ardayda ku guuleysta GPA ee 3.0 ama ka sareeya waxaa lagu qori doonaa "liiska sharafta." Ardayda ku guuleysta GPA ee 3.8 ama ka sareeya waxaa lagu qori doonaa "liiska sharaf sare."
Xilliga uu macallinku khadka tooska ah ku joogo ee ay heli karaan ardaydu iyada oo loo marayo tilmaam toos ah ama taageero (caddayn, hagid, iwm) ee meeleyn, waxqabad ama koox yar inta lagu jiro waqti cayiman. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa "live" meeshii isku mid ahaansho.
Isniinta, Talaadada, Khamiista iyo Jimcaha (isku mid): ardayda iyo macallinkoodu waxay la kulmi doonaan "toos". Waxbariddu waxay la mid noqon doontaa sidii qof ahaan, koox ballaadhan, koox yar iyo 1: 1 tilmaamid ah, oo ay weheliso shaqo madaxbannaan. Kulamo / casharro toos ah ayaa sidoo kale la duubi doonaa.
Arbacada (asynchronous): maalmaha waxbarashada la duubay. Ardaydu waxay baran doonaan iyagoo adeegsanaya horay loo duubay, barashada fiidiyowga ku saleysan sida casharrada fiidiyowga iyo shaqooyinka maalinlaha ah. Macallimiinta ardaygaaga ayaa diyaar u noqon doona shirarka fool-ka-foolka ah ee su'aalaha / wada xiriirka, shaqo kooxeed yar iyo hubinta ardayga / qoyska, sidoo kale waxay u isticmaali doonaan maalinta qorsheynta iyo horumarinta casharka.
Ardayda u baahan baahi waqti kala duwan si ay u hubiyaan fasalka waxay u baahan doonaan inay kula xiriiraan macallimiintooda iyagoo adeegsanaya emayl ama astaamo si ay u diyaariyaan oo aysan noqonin xaalad maalinle ah.
Ardayda seegta fasal waa inay lahaadaan waalid / ilaaliye waca khadka xaadiritaanka dugsiga sare si ay uga cudurdaaraan maqnaanshaha. Haddii uusan jirin wicitaan, ardayga waxaa loo calaamadin doonaa maqnaansho aan la caddeyn.
Ardayda ka maqnaan doonta fasalada waa la aqoonsan doonaa waxaana loo soo bandhigi doonaa kooxda MTSS (nidaamka heerarka badan ee taageerooyinka) kooxda iyo dhexgalka ayaa la horumarin doonaa. Ka dib toddobo fasal oo seegay, qof shaqaale ah ayaa loo qoondeyn doonaa ardayga faragelinta. Haddi 15 ka dib seegay xiisadaha, ardayga waxaa loo gudbinayaa la-taliyahooda heerka fasalka iyo / ama shaqaalaha bulshada.
Ardayda iyo macallimiinta ayaa isla waqtigaas la gelayaa maalmo fasallo isku mid ah. 20-30-ka daqiiqo ee ugu horeeya fasal kasta waxaa loo isticmaali karaa barashada tooska ah ee macalinka; qaybta labaad ee fasalka waa ku shaqaynta casharrada fasalka; qaybta saddexaad ee fasalka waxaa loogu talagalay mashaariic ama shaqo kooxeed.
Fasal kastaa wuxuu yeelan doonaa waqti ku-dhexgal ardayda iyo macallimiinta.
Ardayda Armstrong waxay raaci doonaan "jadwalka xannibaadda" ee afar (4) 85 illaa 90-daqiiqadood maalin kasta, oo leh afar fasal oo isku mid ah Isniinta iyo Khamiista, iyo isla afarta fasal ee Talaadada iyo Jimcaha.
Ardayda Cooper waxay lahaan doonaan jadwal maalinle ah oo kala duwan: saddex (3) 85 illaa 90-daqiiqo oo fasallo ah iyo 90 daqiiqo oo La-talin ah Isniinta iyo Khamiista; afar (4) 90 daqiiqo oo fasalo ah maalmaha talaadada iyo jimcaha.
Dugsiyada sare waxay isticmaali doonaan nidaamka darajada xarfaha inta lagu gudajiro Barashada Fogaanta.
Fasalka Xarunta Ku-saleysan
Qeexid: Ardayda hela inta badan adeegyadooda waxbarashada gaarka ah fasalka waxbarashada gaarka ah ee carruurnimada.
Barashada Fogaanta waxay dhici doontaa Isniinta illaa Arbacada.
Jadwalka ardaygaaga waxaa ka mid noqon kara: soo dhaweynta waxqabadka; waqtiga goobaabka; waxqabad kooxeed yar; taageerayso dhaqan madax banaan; kor u aqri; waxbarasho gaar ah iyo xiritaanka.
Qeexid: Ardayda ku hesha adeegyadooda waxbarasho gaarka ah fasalka carruurnimada hore.
Ardaydu waxay heli doonaan adeegyadooda waxbarasho ee gaarka ah iyadoo lagu saleynayo IEP-ga inta lagu guda jiro barashada masaafada.
Barashada Fogaanta waxaa ka mid noqon kara: 1: 1 tilmaam toos ah oo wax looga qabanayo himilooyinka IEP iyo ujeeddooyinka iyadoo loo marayo Google Meet; Hawlaha SeeSaw; waxqabadyada wax laga badalay sida loogu baahan yahay si loo taageero kaqeybgalka; Yoolalka IEP; kaqeybgalka fasalka
B-3 Farogelinta Hore
Qeexid: ardayda ku hesha adeegyadooda waxbarasho ee gaarka ah gurigooda ama jawiga dabiiciga ah.
Ardayda iyo qoysasku waxay heli doonaan kal-fadhiyo tababarenimo iyo adeegyo ku saleysan Qorshaha Adeegga Qoyska ee Gaarka ah. Ardayda iyo qoysaska waxaa laga yaabaa in lagu casuumo Xarunta Wax Barashada ee New Hope si ay wajiga ugu dhammeeyaan qaybaha qiimeynta hadba sida loogu baahdo.
Waxbarashada Gaarka ah ee Ku-saleysan Xarunta K-12
Qeexitaanka Xarun-ku-saleysan: Ardayda qaata adeegyada Waxbarashada Gaarka ah in ka badan 60% ee maalin dugsiyeedkooda jawi fasal oo yar. (STARS, WAVE, RISE iyo LEAP program).
Barashada Fogaanta waxay dhici doontaa shan maalmood usbuucii, Isniinta illaa Jimcaha.
Barashada Fogaanta waxaa ka mid noqon kara: subaxnimadii iyo galab shirarka fasalka / fadhiyada bulsho-shucuur; laba baloog barasho oo ku lug leh casharro yaryar, horay loo duubay ama ku-dhaqan toosan oo toos ah; waxqabadyo madax bannaan oo lagu dhajiyay SeeSaw ama Schoology; shaqsi iyo / ama koox yar oo waxbarid leh kal-fadhiyo gaar ah oo toos ah oo loogu talagalay adeegyada IEP iyadoo lagu saleynayo qorshaha barashada masaafada shaqsiyeed ee shaqsiyeed; kala-goynta dhaqdhaqaaqa; qaaska, koorsooyinka xulafada iyo xulashada.
Maareeyayaasha kiisku waxay la xiriiri doonaan qoysaska si ay ugala hadlaan IEP-ga ardaygooda ee ku saabsan barashada masaafada toddobaadyada ugu horreeya ee dugsiga.
Shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah waxay ku bixin doonaan adeegyo qaab isku mid ah (toos ah), qaabab isku mid ah iyo telehealth.
Bixiyeyaasha caafimaadka maskaxda ayaa diyaar u noqon doona inay ka taageeraan daryeelayaasha abuurista qaabab iyo jadwalka joogtada ah ee ardayda guriga jooga si loo hubiyo guusha.
Qiimaynta waxbarashada khaaska ah waxaa lagu qaban doonaa Xarumaha Taakulaynta Ardayda iyadoo la raacayo hab maamuuska nabadgelyada ee habboon.
Dugsiga Dhexe iyo Sare
Ardayda leh barnaamijka waxbarashada shaqsiga ah (IEPs) ayaa jadwalkooda loo qaabeyn doonaa si ay ugu habboonaadaan nooca dhismaha.
IEPs waa la cusbooneysiin doonaa si ay uga tarjumaan isbeddelka daqiiqadaha iyo bixinta tilmaamaha iyo taageerada
Shaqaalaha waxaa loo tababbari doonaa bixinta adeegyada IEP inta lagu jiro barashada fogaanta.
Barashada Fogaanta waxaa ka mid noqon kara: jeegaga shaqsiyeed ee subaxa shaqaalaha; fasalka koowaad (tusaale Maareynta Lacagta); fasalka labaad (tusaale ahaan Khibrad Shaqo); fasalka saddexaad (tusaale ahaan, Xirfadaha Jilicsan); la-talin iyada oo diirada la saarayo barashada bulshada-shucuurta; nasasho qadada; waxqabadyo madax-bannaan galabnimo iyo isku xirnaan shaqsiyeed.
Macluumaadkan waxaa loogu talagalay Waxbarashada Qoyska Hore ee Carruurta (ECFE).
Koorsooyinka waxaa loo qaabeyn doonaa barashada internetka.
Koorso 90-daqiiqo ah oo koorso ah oo ku saabsan Google Meet ayaa ka mid noqon kara waqtiga wareega, isdhexgalka waalidka / canugga, waqtiga sheekada, wadahadalka waalidnimada iyo soo koobista / xiritaanka.
Fadlan ogow, waxaan dib u eegis ku sameyneynaa waalidkeen ECFE iyo koorsada cunugga si aan ula kulanno baahiyaha qoys ee kala duwan, iyadoo mudnaanta la siinayo caafimaadka iyo badbaadada bartayaashayada ugu yar, qoysaskooda, iyo shaqaalaheena. Buug yar oo dib loo eegay ayaa soo socda. Fasallada lagu calaamadeeyay Masaafada waxay kusii socon doonaan khadka tooska ah inta koorsada socoto.
Fasallada dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta waxaa lagu bixin doonaa iyada oo la jaanqaadeysa habka waxbarashada aasaasiga ah. Tan macnaheedu waxa weeye in lagu bilaabo sanad dugsiyeedka hoosta Moodalka Barashada qaab dhismeedka muraayad u leh barashada goobta:
Dhamaan howlaha isgaarsiinta iyo waxbarida waxaa lagu gaarsiin doonaa SeeSaw.
Dhammaan ardayda waxay heli doonaan fursad fasal kasta oo fasal ah si ay ugu biiraan kulan jadwalka tooska ah ee fasalka oo dhan loogu talagalay 15-20 daqiiqo oo loo maro Google Meet. Waqtigaan waa la dheereyn karaa maadaama ardayda ay caadeysteen oo ay ku helayaan adkeysi kulanka khadka tooska ah.
Arday kasta wuxuu fursad u helayaa inuu ku biiro koox yar Google Meet ugu yaraan hal mar usbuucii 15-20 daqiiqo oo kale oo ah barashada tooska ah.
Kulamada waa la duubayaa si ardaydu ay ugu heli karaan sida ugu haboon ee ay dib ugu eegi karaan kadib. Qoysasku waxay dooran karaan inay kamaradaha iska dhaafaan.
Fursado dheeraad ah oo ikhtiyaari ah oo loogu talagalay ardayda inay kula xiriiraan shaqaalaha inta lagu jiro waqtiyada isku xirnaanta ee loo maro Google Meet.
Waxqabadyada barashada ee kuxiran barashada tooska ah ayna taageerayaan fiidiyowyada iyo ilaha kale ee akhriska, xisaabta, barashada shucuurta bulshada, dhaqdhaqaaqa, iyo farshaxanka, waxaa lagu wadaagi doonaa Seesaw iyadoo loo marayo fasal dalwad ah. Waxqabadyadan waxaa lagu dhammaystiri karaa muddada jadwalka fasalka sida caadiga ah loo qorsheeyay ama waqti ku habboon qoysaska.
Tiro kooban oo ah iPad-yada iyo Goobaha Kulul ayaa loo heli doonaa qoysaska, iyadoo mudnaanta la siinayo qoysaska aan marin u helin aalad kale.
Macluumaad Dheeraad ah: 5-maalmood Dugsiga barbaarinta ah
Macluumaadkan waxaa loogu talagalay shan-maalmood, 4-sano-jir ah dugsiga barbaarinta (VPK ee dugsiyada hoose iyo Xarunta Waxbaridda ee New Hope).
Arbacada (asynchronous): maalmaha waxbarashada la duubay. Ardaydu waxay baran doonaan iyagoo adeegsanaya horay loo duubay, barashada fiidiyowga ku saleysan sida casharrada fiidiyowga iyo shaqooyinka maalinlaha ah. Macallinka ardaygaaga ayaa diyaar u ah inuu su'aalo ka helo / la xiriiro kooxo yar yar ama shirar shaqsiyadeed, sidoo kale wuxuu maalintaas u isticmaali doonaa qorsheynta iyo horumarinta casharka. Arbacada sidoo kale waxaa loo isticmaali doonaa jadwalka qalabka ee qaadista iyo soo dejinta.
Macalimiintu waxay qaadan doonaan xaadiritaanka maalin kasta. Ardayga waxaa loo qaddarin karaa ka-qayb-galka isaga oo ka qayb gala wada-sheekaysi fiidiyoow ama fasal fasal lala yeesho macallin; wicitaan taleefan, emayl ama SeeSaw; adoo soo gudbinaya hawl qabasho maalin cayiman.
Qoysasku waxay eegi doonaan maalinta fasalkooda loo qoondeeyay.
Qoysaska aan awoodin inay iska xaadiriyaan isla markaana u shaqeyn doonaan si isku mid ah waxaa hubin kara waalid / ilaaliye iyaga oo la xiriiraya macallinka ardaydooda.
Haddii ardaygaagu jiran yahay, waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waa inay wacaan xafiiska. Haddii uusan jirin wicitaan, ardaygu wuxuu calaamadeyn doonaa maqnaanshaha macallinkuna wuxuu la xiriiri doonaa qoyska.
Haddii ardaygu maqnaado laba maalmood oo isku xigta oo iskuul ah iyada oo aan xafiiska laga soo wicin, macallinka ayaa ogeysiin doona xafiiska.
Dugsigu wuxuu raaci doonaa xilliyada bilowga iyo dhammaadka dugsiga ardaygaaga, si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo ay ardaydu ku dhammayn karaan (dhammaystiraan) shaqadooda oo dhan goor hore.
Shaqada ardayda waa in lagu soo dhejiyaa SeeSaw.
Maalinta iskuulka ee ardaygaaga waxaa ka mid noqon kara: fariinta salaanta, waqtiga goobaabka iyadoo la adeegsanayo Google Meets, nashaadaadka guriga, waqti yar oo kooxeed iyadoo la adeegsanayo Google Meets, waqtiga isku xirnaanta oo ah fursad dheeri ah oo loogu xiriiro macallinka iyo waqtiga dhaqdhaqaaqa guriga.
Ardayda Akadeemiyada Dadka Waaweyn waxay awoodi doonaan inay galaan fasallo kala duwan oo ah qaab waxbarasho oo fog, oo ay ku jiraan Luqadda Ingiriisiga, GED, Xirfadaha Tacliinta, iyo Dhaawaca Maskaxda / Maskaxda.
Fasallo maalmeed iyo casharo fiidkii ah ayaa la bixin doonaa.
Macalimiinta ayaa diyaar u noqon doona caawimaad dalwad ah maalin kasta.
Xarumaha Taakulaynta Ardayda waxaa lagu heli doonaa ballan.
Ciyaaraha Fudud iyo Hawlaha
Joog guriga haddii aad:
Aad isku aragto astaamo xanuun / COVID-19. Calaamadaha COVID-19 hadda waxaa ka mid ah: qufac, neefta oo ku qabata, qandho, qarqaryo, murqo xanuun, hungur xanuun, dareenka urta ama dhadhanka oo la waayo, iyo calaamadaha caloosha iyo caloosha ee shuban, matag, ama lallabbo. Kani maahan liis loo wada dhan yahay waana muhiim inaad guriga iska joogto haddii aad leedahay wax calaamado jiro ah.
Isku tijaabisay COVID-19.
Waxaan sugeynaa natiijada baaritaanka COVID-19.
Dhawaan waxaan xiriir dhow la yeeshay qof qaba COVID-19 14-kii maalmood ee la soo dhaafay.
Hab maamuuska Shaqaalaha
Dhamaan shaqaalaha dhismayaasha waxaa laga rabaa inay:
Xidho wejiga daboolida marka aanad ku jirin meel bannaan keligood.
Masaafada bulshada lix fuudh u jirta dadka kale inta dhismaha lagu jiro.
La samee jadwal maamulaha dugsiga goorta ay dhismaha ku jiraan oo ay soo galaan ama ka baxaan maalin kasta.
Shaqaaluhu waa inaysan carruurta ama martida la soo gelin dhismaha.
Shaqaaluhu waa inay guriga joogaan markay muujinayaan Astaamaha cudur kasta, sida ku cad tilmaamaha ka-reebitaanka ee Waaxda Caafimaadka ee hadda jirta ee COVID-19.
Hab-maamuuska Ardayda / Qoysaska
Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC) hadda kuma talinayaan in guud ahaan baaritaanka COVID-19 ama baaritaanka astaamaha lagu sameeyo iskuullada si loogu oggolaado gelitaanka barnaamijyada.
Ardayda iyo qoysasku waa inay sameeyaan is-baarid COVID-19 kahor intaysan gurigooda ka bixin oo aysan imaan dugsiga. Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah ee ardayda u diraya iskuulka waxay xaqiijinayaan in ardaygooda uusan la kulmin astaamaha COVID, uusan la kulmin qof qaba COVID ama uusan sugeynin natiijada baaritaanka COVID ama ogaanshaha kale (xanuun. Dhuun xanuun oo laga yaabo inuu keeno Strep Throat ).
Baadhitaanka guriga waxaa ka mid ah: hubinta astaamaha (dhuun xanuun, qufac, shuban, matag, calool xanuun, madax xanuun cusub oo cusub); hubinta heerkulka; xiriir dhow / soo-gaadhis
Daboolida wajiga ayaa waajib ku noqon doonta dhammaan shaqaalaha, ardayda, iyo booqdayaasha. Daboolida wajiga waa in lagu xiraa iyada oo lagu darayo talaabooyinka kale ee lagu xakameynayo infekshinka, oo ay ku jiraan fogaanta bulshada CDC waxay sheegtay in daboolida wajiga ay ugu waxtar badantahay marka ay xirtaan dhamaan shaqsiyaadka goobaha dadweynaha markay kudhowaan kuwa kale ee ka baxsan gurigooda. Istaraatiijiyaddan yareynta ee muhiimka ah waxay hubisay in ardayda iyo shaqaalaha laga siin doono waxyaabaha soo socda Gobolka Minnesota:
Arday kasta oo K-12 ah waxaa lasiin doonaa hal maro oo wejiga lagu daboolo.
Xubin kasta oo shaqaalaha iskuulka ka mid ah waxaa lasiin doonaa hal maro oo wejiga lagu daboolo.
Dugsi kastaa wuxuu heli doonaa saddex weji oo waji-shareer ah oo arday kasta la saari karo.
Dugsi kastaa wuxuu heli doonaa gaashaam waji ah dhammaan macallimiinta ruqsadda haysta iyo 50% shaqaalaha aan shatiga haysan.
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay xaqiijiyeen 100,000 oo waji si ay u siiyaan shaqaalaha iyo ardayda u baahan doona wejiga daboola.
Difaaca wajiga ayaa loo soo iibiyay Kiliinikada Hadalka iyo Luqadda, macallimiinta ay dhigtaan ardayda DHH fasalkooda, Kaaliyeyaasha Waxbarashada ee la shaqeeya ardaydayada DHH, iyo shaqaalaha Caafimaadka.
Dharka la tuuro waxaa bixiya adeegsiga Adeegyada Caafimaadka iyo shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah ee sida tooska ah ula shaqeeya dadka halista badan leh. Goonnada waxaa siinaya adeegsiga shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah, Shaqaalaha Adeegga Caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee sida tooska ah ula shaqeeya dadka halista badan leh.
Dhaqdhaqaaqa / Raadinta Dhaqdhaqaaqa Dhismooyinka
Shaqaalaha iyo ardayda ayaa gacmaha iska dhaqda markay yimaadaan dugsiga.
Shaqaalaha iyo ardeydu waxay xirtaan waji-furka gudaha guriga illaa laga reebo.
Waxaa la isticmaali karaa ilaha biyaha laga cabo, ardayda sidoo kale waxay leeyihiin ikhtiyaar ay kaga soo qaataan dhalooyinka biyaha guriga.
Qaababka taraafikada ayaa sagxadda dhulka ku jiri doona si ay uga caawiyaan marin habaabinta bulshada ee habboon.
Haddii ay suurtagal tahay, hal dariiq oo taraafikada ayaa la hirgelin doonaa.
Dhammaan qolalka dukumiintiga raadinta ayaa laga heli karaa dhammaan qolalka. Shaqaalaha dokumentiga yaa ku jira meeqa meelood 15 daqiiqo ama ka badan.
Inta lagu jiro Barashada Fogaanta, ardayda waxay heli doonaan xirmooyin cunno ah oo ay ku jiraan quraac iyo qado laga heli karo goobaha iskuulka ee degmada oo dhan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobahan cuntada waxaa lala wadaagi doonaa qoysaska.
Ardayda uqalma dheefaha waxbarasho waxay heli doonaan cunno BILAASH ah. Dhammaan qoysaska waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay codsadaan dheefaha waxbarasho (bilaash iyo qiimo dhimis) khadka tooska ah ee rocketscan.rdale.org .
Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay raacaan hagitaan ay bixiyaan Ururka Dugsiyada Sare ee Gobolka Minnesota (MSHSL).
MSHSL waxay soo saartay ogeysiis COVID-19 ah oo loo qaybinaayo qoys kasta oo leh arday diiwaangelinaya waxqabad kasta. Armstrong iyo Cooper ayaa ogeysiiskan u qaybinaya qoysaska iyada oo qayb ka ah nidaamka diiwaangelinta.
MSHSL waxay ka sameysay bog boggooda internetka oo ay ku qoran tahay dhammaan dukumiintiyada MSHSL ee bixiya hagitaanka iyo macluumaadka loogu talagalay waxqabadyada iyo isboortiga: Hagaha Isboortiga iyo Macluumaadka Kheyraadka La Xiriira COVID 2020-2021 .
Tilmaamaha gaadiidka ee ay dejiyeen Waaxda Caafimaadka ee Minnesota iyo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxaa ku xigi doona waaxda isboortiga ee Armstrong iyo Cooper oo la kaashanaya Ardayga Koowaad.
Tilmaamaha guud waxaa ka mid ah:
Ugu badnaan 24 arday oo bas saaran
Ardaydu waa inay lahaadaan maaskarada / wejiga qarinaya inta ay saaran yihiin baska.
Ardaydu waa inay fadhiistaan kursi kasta oo kale.
Walaalaha waxay awoodi doonaan inay ku wada fariistaan hal kursi.
Dhaqan ahaan ardayga ciyaartooygu wuxuu baska waxqabad ka raacaa marka uu dugsiga ka soo laabto. Dugsiyada Sare ee Armstrong iyo Cooper waxay ku dari doonaan wadada basaska waxqabadka si ay ardayda u soo qaadaan oo ay u keenaan dugsiga si ay ugu tababaraan galabnimada. Ardaydu waxay markaa u raaci doonaan baska waxqabad guriga ka dib tababarka, Isniinta-Jimcaha.
Wadooyinka waxqabadka waxaa la maamuli doonaa Isniinta ilaa Jimcaha, kuna saleysan xaadiritaanka, laga bilaabo Talaadada, Sebtember 8, 2020.
Wadooyinka waxqabadka ee ardayda laga soo qaado waxay la mid noqon doonaan dariiqyada loo isticmaalo in ardayda lagu geeyo guriga ka dib marka la tababbarto. Ardayda waa la soo dejin doonaa waxaana laga qaadi doonaa boosteejooyinka basaska ee loogu talagalay.
Ardaygu wuxuu u baahan doonaa inuu horay isudiiwaangaliyo si uu u raaco baska waxqabadka si uu tababar ula qabsado.
Ardaygu wuxuu ku bixin doonaa magaca, cinwaanka hadda jira, id id # iyo magacyada waalidiinta iyadoo loo marayo Foomka Google.
Ardayda waxay u baahan doonaan inay tusaan aqoonsigooda iskuulka darawalka baska markay baska raacayaan.
Darawalka basku wuxuu weydiisan karaa ardayga inuu ka qaado maaskaro / wejiga daboolaya si loo ogaado aqoonsiga.
Haddii hada ardayda aan la qaybin, xafiiska isboortiga ee u dhigma ayaa ardayda siin doona baasaboor ku meelgaar ah.
Mar alla markii loo diiwaangeliyo soo qaadista baska waxqabadka, ardayga waxaa looga baahan doonaa inuu raaco baska ilaa ay ka wargeliyaan macallinkooda ama xafiiska ciyaaraha fudud.
Goobaha laga tago iyo meelaha laga soo qaado iskuulka:
Armstrong - Wuxuu u isticmaali doonaa wareegga dugsiga hortiisa inuu ku rido oo uu ardayda ka soo qaado
Cooper - Wuu dhici doonaa oo wuxuu ka qaadi doonaa ardayda gadaasha dugsiga qolka jimicsiga. Inta udhaxeysa albaabka 18 iyo albaabka 19.
Kooxaha hadda jira waxay heli doonaan ciyaartoy inay iska diiwaangeliyaan gelitaanka basaska dhaqdhaqaaqa laga bilaabo Ogosto 25-Ogosto 31. Tani waxay ka caawin doontaa Ardayga Koowaad inuu qiimeeyo jidadka iyo baahida joogsiga goobta.
Kubadda Cagta iyo Kubadda Laliska xilliyada layliga wuxuu bilaabmayaa Sebtember 14, 2020. Rakaabka basku waa inuu kordhaa inta lagu jiro waqtigaas. Baahida basku waxay qayb ka noqon doontaa nidaamka diiwaangelinta ardaydan. Macluumaadka oo dhameystiran waxaa laga yaabaa inaan la helin illaa Sebtember 6, 2020.
Ciyaaraha guga ee qabashada ku dhaqanka xilliga dayrta ma bilaabmi doono illaa Oktoobar 5, 2020. Diiwaangelinta tan waxay dhici doontaa horaanta Sebtember.
Dugsiyada Sare ee Armstrong iyo Cooper ayaa gaadiid u fidin doona kooxahooda si ay u gaaraan ciyaar loo qorsheeyay.
Ardayda waxay ula raaci doonaan kooxda ciyaar.
Haddii arday doorto inuu waalidkood u raaco guriga, waalidka / mas'uulka ayaa u baahan doona inuu siiyo ogolaansho qoraal ah maalinta ka horreysa ciyaarta madaxa tababaraha.
Tilmaamaha guud ee gaadiidka ciyaarta ayaa la mid noqon doona:
Ardayda waxaa lagu kala fogeynayaa baska dhexdiisa.
Ardaydu waa inay wejiga ku daboolaan markay baska saaran yihiin.
Amarka fulinta ee 20-82 wuxuu muujinayaa goorta Dugsiga Robbinsdale Area uu ku shaqeynayo qaab barasho isku dhafan ama masaafo ah "waa inuu siiyaa daryeel da'da iskuulka ah Carruurta uqalma iyada oo aan wax kharash ah ku bixin inta lagu jiro waqtigaas carruurtaas aan helin waxbaridda dhismaha dugsiga inta lagu jiro saacadaha caadiga ah ee dugsiga." Daryeelka da'da iskuulka waa in loo fidiyaa carruurta da'da iskuulka jirta 12 iyo wixii ka hooseeya oo ah carruurta shaqaalaha muhiimka ah ee Tier I ee liiska shaqaalaha muhiimka ah ee gobolka. Carruurta Tier I shaqaalaha kaliya ayaa la daryeeli doonaa iyada oo aan wax kharash ah lagu bixin inta lagu jiro saacadaha caadiga ah ee dugsiga. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan bixinta daryeelka da'da dugsiga, oo ay ku jiraan liiska shaqaalaha Tier I, eeg "Barnaamijyada Daryeelka Da'da Iskuulka ee Dugsiyada" ee MDE ee Qorsheynta Sannad Dugsiyeedka 2020-21.
Si aad isu diiwaangeliso daryeelka carruurta, fadlan booqo https://rdale.ce.eleyo.com/ . Xannaanada carruurta waxaa la siin doonaa ardayda dugsiga hoose iyo dhexe.
Jadwalka Maalinlaha ee Daryeelka Da'da Dugsiga
Subaxnimada hore iyo galabnimada daryeelka waxaa ku jiri doona waxqabadyo madadaalo leh. Daryeelka inta lagu jiro saacadaha iskuulka waxaa ku jiri doona shaqaale u fududeeya jadwalka waxbarashada degmada ardayda. Shaqaaluhu maahan macalimiin ruqsad haysta laakiin waxay maamuli doonaan fasalka, waxay ka caawin doonaan su'aalaha, waxay ka caawin doonaan ardayda inay galaan si ay ula kulmaan macalimiintooda oo ay qorsheeyaan fasaxyada dabiiciga sida fasaxyada iyo waqtiyada cuntada. Daryeelka carruurtu wuxuu raaci doonaa tilmaamaha caafimaadka MDH ee barnaamijyada daryeelka da'da dugsiga. Kormeeraha goob kasta ee daryeelka da'da dugsiga wuxuu la xiriiri doonaa qorshe maalinle ah oo faahfaahsan oo ay ku jiraan waxa la keenayo, hoos u dhacayo / qaadista nidaamka, jadwalka maalinlaha ah iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah marka diiwaangelintaada la aqbalo iyo kahor maalinta ugu horreysa ee xaadiritaankaaga.
Tilmaamaha Qorsheynta ee 2020-2021 ee Dugsiyada: Tixgelinta Caafimaadka ee La-socoshada COVID-19 , Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay u baahan tahay, "Soo-booqdayaasha aan muhiimka ahayn, mutadawiciinta, iyo howlaha ku lug leh kooxaha ama ururada dibedda ah waa in la xaddido." Sidaa darteed, waxaan sii wadaynaa joojinta adeegsiga tabaruceyaasha shaqsi ahaanta ah ee masaafada fog iyo dhacdooyinka isku dhafan.
Barnaamij iskaa wax u qabso oo iskaashi ah oo loo yaqaan "virtual" oo iskaa wax u qabso ah ayaa la abuurayaa kaas oo u oggolaanaya barkadeena tabaruca ee hadda jira inay si toos ah ula shaqeeyaan ardayda iyadoo wax laga qabanayo arrimaha khuseeya asturnaanta xogta iyo kormeerka. La xiriir Mindy Potvin oo ku saabsan Tabaruceyaasheena xafiiska Iskaashiga at iskaa wax u qabso@rdale.org .